निर्वाचनबारे बेखबर वाल्मीकि आश्रम टोल « प्रशासन
निर्वाचनबारे बेखबर वाल्मीकि आश्रम टोल
चितवन । एउटा झुप्रो घरको पिँढीमा एक दम्पती सोमबार दिउँसोको गर्मी छल्न सुतिरहेका थिए । आ–आफ्नै मोबाइलमा मस्त थिए उनीहरु ।
दाइ चुनाव लागेको छैन ? पदमबहादुर राना मगर जुरुक्क उठे, “खै चुनाव छ भन्थे क्यारे अरुले त, हामीलाई त था छैन, चुनाव आ’छ कि छैन भनेर । कोही नेताहरु नि आ छैन भोट माग्न ।”
“अनि भोट हाल्नचाहिँ नजाने उसो भए ?” अर्को प्रश्नमा पदमबहादुरले भने – “नेता आए हाल्ने हो क्यारे, को खोजेर जान्छ र भोट काँ हाल्ने भन्दै ?”
चितवन निकुञ्जको पश्चिम भारतीय सिमानामा पर्ने वाल्मीकि आश्रमका उनी पहिले जितेकाले पनि केही काम नगरेको गुनासो गर्छन् । सुकुम्बासी बस्तीमा नयाँ घर बनाइदिन्छु भनेर अघिल्लो निर्वाचनमा भोट माग्न आएका थिए । नेताको आश्वासन अझै उनलाई ताजै छ । तर अहिलेसम्मै फर्केर आएनन् । त्यही भएर नेताहरुप्रति उनको ठूलो वितृष्णा छ ।
चितवनको माडी नगरपालिका वडा नं. ३ मा पर्छ वाल्मीकि आश्रम । चौध घर रहेको यो बस्ती चितवन निकुञ्जको पश्चिम अन्तिम भाग भारतीय सीमामा छ । जिल्ला सदरमुकाम भरतपुरबाट करिब १२० किमी टाढा सवारी यात्रामा नवलपरासी हुँदै भारत छिचोलेर जानुपर्ने बाध्यता छ ।
धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र हो वाल्मीकि आश्रम छ । सीता पातल भासिएको, लवकुश जन्मिएर शिक्षा आर्जन गरेको र वाल्मीकिले यही बसेर रामायण लेखेको भनाइ छ । आश्रमसँगै जोडिएको चौध घर सुकुम्बासीको बस्तीमा ६० जनाको जनसङ्ख्या छ भने ३५ जना मतदाता छन् ।
जिल्लाका अन्य क्षेत्रमा घरघरमा आ–आफ्ना पार्टीका झन्डा फहराइएका छन् । अन्य गाउँमा चुनावी नारा घन्किरहेका छन् । चुनावी गीत बजाउँदै दलका नेता कार्यकर्ता नाचगानका साथ भोट मागिरहेका देखिन्छन् । छिमेकी त्रिवेण सुस्तामा पनि चुनावी माहोल चर्को छ ।
डुङ्गाबाट जान नेताहरुलाई समय छैन । नवलपरासीको त्रिवेणीधामबाट नारायणीमा डुङ्गा तरेर आधाघन्टाको बाटो जङ्गल हिँडेपछि भेटिन्छ वाल्मीकि आश्रमको यो गाउँ । “खै अभितक त हामीकोमा कोही पनि आउनु भा’छैन, चुनाव खै २९ हो कि ३१ गते हो भन्ने सुन्या थेँ रेडियोमा” – सुर्य गुरुङले भने ।
गाउँलेहरु पत्रकारप्रति भरोसा गर्छन् । “चुनावका बारेमा भन्न आएको पहिलो नै तपाईंहरु हो,” सूर्यले भरोसा गरे– “अब यसो पहल गर्दिने हजुर जस्तो पत्रकार नै हुनुहुन्छ, अरु पहल गर्ने मान्छे को छ र ? के गर्नु, नेतालाई जिताइयो, एक दिन पनि आ’छैन जितेपछि ।”
पहिले जितेर गएका नेता नफर्कंदा उनीहरु राजनीतिप्रति कटाक्ष गर्छन् । “पहिले चुनावमा नेताहरु आ’थे, यसो उसो भन्छन् आफ्नो काम लिएपछि सिद्धियो, अब त आयो भने एउटा भोटको १० हजार”– यमबहादुर मगरले भने ।
– चुनाव कहिले हो थाहा छ बा ?
छैन, अहिले हामी भाराभूरीको हो र, ठूल्ठूलो हाकिमहरुको हैन र ?
– कसैले भनेको छैन तपाईंलाई ?
भनेको छैन क्यारे, चुनाव आ’को नि था छैन, चुनाव त भन्दै छन्, के के हो के के, आजकालको कानुन बुझिन्न ।
– यही वैशाख ३१ मा हो नि त चुनाव ।
(आश्चर्य मान्दै) हो र ? वैशाख पनि त अब कति छ र ? मतदाता शिक्षा दिने स्वयंसेवक पनि आ छैन ? कोही पनि आ छैन ।
– अरु को आयो त चुनावको कुरा गर्न ?
घर चितवन, भोट नवलपरासी
यमबहादुर मगरका अनुसार यहाँका सबैको बजार भारत हो । भारतमै कमाउन जान्छन् । गाउँका १० युवक अहिले कमाउन भारत गएका छन् । भोट हाल्नचाहिँ सबै नवलपरासी जान्छन् । आफ्नै देशबाट जाने भरपर्दो बाटो छैन ।
डुङ्गाबाट जान पर्यटकलाई प्रतिव्यक्ति १०० पर्छ । स्थानीयवासीलाई ५० लाग्छ । “एकमुठी नुन घटे पनि भारत नै जानुपर्छ, यताबाट जाँदा डुङ्गामा ५० लिन्छ । त्यसले तीन पोका नुन आउँछ”– सूर्यले अनुभव सुनाए ।
वि.सं. २०३५ मा सिन्धुलीबाट आएका हुन् सूर्य । अहिले उनी आश्रम रेखदेख गर्छन् । उक्त गाउँमा अहिले खानेपानीको पनि राम्रो प्रबन्ध छैन । गाउँमा सौर्य बत्ती भने जोडिएको छ । शौचालयका सामग्री त्यसै थन्किएका छन् ।
खोलाको पानी पिउनुपर्ने बाध्यता छ उनीहरुलाई । यस्तो अवस्थाका सुकुम्बासीका बारेमा चुनावमा समेत नेताहरु नपुग्नु विडम्बना छ ।
Tags : वाल्मीकि आश्रम टोल